Biochemistry momba ny ra - transcript
Ny fandinihana momba ny fikarohana momba ny ra dia fomba fitsaboana ra, izay matetika ampiasaina amin'ny fitsaboana, rheumatology, gastroenterology ary sehatry ny fitsaboana. Io famakafakana momba ny laboratoara io no maneho tsara indrindra ny toetry ny rafitra sy ny taova.
Glucose amin'ny bio-chemistry
Tokony ho iray andro aorian'ny fiterahana ny rà, ianao dia handray ny vokatry ny biochemistry. Hanondro ny habetsaky ny votoaty samihafa. Sarotra ho an'ny olona tsy manana fanabeazana ara-pitsaboana ny hahatakatra ny vokatry ny fandalinana. Saingy ankehitriny ny fandikana ny fanadihadiana momba ny bio-chemistry ra dia mifatotra hatrany amin'ny andrim-panjakana.
Ny votoatin'ny siramamy ao amin'ny ra dia endriky ny metabolisma karbôgria. Ny glucose dia tsy tokony ho 5.5 mmol / l fa tsy latsaky ny 3.5 mmol / l. Ny fampitomboana tsy mitsaha-mitombo amin'ity endri-tsoratra ity dia matetika no hita rehefa:
Ny fiasan'ny Cushing;
fanerena ara-batana be loatra;
aretina amin'ny androngo.
Raha manana bakteria ambany ny gliokaozy ao amin'ny biochemistry manontolo amin'ny rà, dia manondro fa ny fanasitranana insuline, ny tsy fahampian-tsakafon'ny tsiranoka amin'ny endrinina na ny fanenjehana mahery vaika ateraky ny fahasimbana amin'ny aty.
Pigment ao amin'ny biochemistry an'ny ra
Ao amin'ny famaritana ny fitsapa-kevitry ny ra ho an'ny biochemistry, ny habetsahan'ny pigments-bilirubin amin'ny mivantana sy bilirubin amin'ny total dia voatondro foana. Ny fitsipika amin'ny bilirubin tanteraka dia 5-20 μmol / l. Ny fiovana miavaka amin'ity endri-tsoratra ity dia mampiavaka ny aretina isan-karazany (toy ny hepatita sy ny cirrhose), ny jungle mécanique, ny poisoning, ny homamiadana, ny cholelithiasis ary ny tsy fahampian'ny vitamin B12.
Ny fitsipika momba ny bilirubinina mivantana dia 0-3,4 μmol / l. Raha toa ianao ka nanao biochemistry ny rà avo ary avo kokoa ny mari-pahaizana, dia mety hanondro ny fanondroanao fa:
toxic na hepatita viral viral;
aretina ny atin'ny aretina;
Faty amin'ny fanadihadiana momba ny ra
Rehefa tapaka ny ra metabolisma ao amin'ny ra, mitombo hatrany ny votoatin'ny lipida sy / na ny ampahany (cholesterol esters sy triglycerides). Ny fandikana ireo famantarana ireo amin'ny vokatra azo avy amin'ny fikarohana momba ny biochemie dia tena zava-dehibe, satria tena manan-danja tokoa izy ireo amin'ny fanombanana tsara ny fahaiza-manaon'ny voa sy ny aretina isan-karazany. Amin'ny ankapobeny dia tokony:
cholesterol total - 3,0-6,0 mmol / l;
triglycerides 0,40-2,70 mmol / l (arakaraka ny taona).
Ny rano sy ny mineraly amin'ny bio-chemistry
Ao amin'ny ran'ny olona dia misy karazana tsy misy taova: potassium, asidra folie, vy, calcium, magnesium, phosphorus, sodium, chlorine. Ny fanitsakitsahana ny fatran'ny rano-mineraly amin'ny karazana rehetra dia matetika hita amin'ny endrin'ny diabeta mellitus, aretin'ny tiroida sy ny aretim-po.
Amin'ny ankapobeny, ny halavan'ny kalesy dia tokony ho 3.5-5.5 mmol / l. Raha misy fitomboan'ny fifantohana, dia amin'ny famaritana ny biochemistry ny ra ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy dia aseho fa ity dia hyperkalemia. Io toetra io dia mampiavaka ny hémolyse, ny tsy fahampian-drano, ny tsy fahampian-tsakafo ary ny tsy fahampian-tsakafo. Mihena ny fihenan'ny potassium hypokalemia. Ity toe-piainana ity dia marika iray momba ny fihenan'ny renena, ny fibsy gastronomy, ny hormonina mihoatra ny hormonina ao amin'ny cortex adrenal.
Ao amin'ny fanadihadiana ny fanadihadiana momba ny biochemistry ny ra, ny mari-pamantarana sodium dia 136-145 mmol / l. Ny fampitomboana an'io mari-pamantarana io matetika dia manondro ny fandikana ny asan'ny cortex adrenal na ny psykolojian'ny hypothalamus.
Ny norma de chlorine ao amin'ny ra dia 98-107 mmol / l. Raha betsaka kokoa ny fampahalalana, dia mety hiharan'ny otrikaretina izy, ny fanasitranana salicylate na ny tsy fahazoana adinokortika. Saingy ny fihenan'ny vontoaty madinika dia voamarina amin'ny fandosirana, fihenam-bidy eo amin'ny habetsaky ny fluidina sy ny hafanana be loatra.
Rotavirus - vanim-bolana
Mionona ny vava - inona no tokony hatao?
Mihabetsaka ny amylase ao amin'ny ra
Plastika amin'ny labia
Ny famantarana voalohany amin'ny SIDA
Castles avy any Bavaria
Salady "Trondro ao anaty dobo"
Rakitsary dokam-barotra 33 tianao haleha indroa
Ahoana no handrefesana tsindry tsy misy tonometera?
Fanatanjahantena hanamafy ny lamosina ambany
Oscillococcinum amin'ny fampinonoana
Inona no havoaka avy any Kiobà?
Ahoana ny fomba fitafy ho an'ny vehivavy ao amin'ny fiangonana?